Mudo intee le'eg ayay ku qaadataa Darajaynta Natiijooyinka Raadinta Google? | Martech Zone
Khamiista, Sebtember 13, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Mar kasta oo aan sharraxaad ka bixiyo macaamiishayda, waxaan isticmaalaa isbarbardhigga tartanka doon halkaas oo Google ay tahay badweynta oo dhammaan tartamayaashaadu yihiin doomo kale. Doomaha qaar ayaa ka waaweyn kana wanaagsan, qaar duug ah oo ay dirqi ku joogaan. Dhanka kale, baddu waxay u socotaa sidoo kale… duufaanno (algorithm beddelaad), mowjado (raadinta meelaha caanka ah ee raadinta iyo barkadaha), iyo dabcan caan ka sii ahaanshaha waxyaabahaaga.
Waxaa jira marar badan oo aan ku aqoonsan karo daldaloolada noo oggolaanaya inaan si sax ah ugu dhex socono oo aan u soo bandhigno muuqaalka darajooyinka raadinta dabiici ahaanta, laakiin inta badan waxay u baahan tahay waqti in la arko waxa ka dhacaya warshadaha macmiilka, nooca dadaalka ay tartamayaashu wadaan iyo sida maamulkooda raadinta ay u saameeyeen isbeddelada algorithm iyo arrimaha caafimaadka goobta.
Sida laga soo xigtay Ahrefs, kaliya 5.7% ee bogagga cusub ayaa waligood hela qiimeynta natiijooyinka 10 ee ugu sarreeya Google sannad gudihiis.
Sida laga soo xigtay Ahrefs, kaliya 0.3% ee bogagga cusub ayaa waligood hela darajooyinka ugu sarreeya ee 10 ee Google sanad gudihiis oo ah ereyga muhiimka ah ee tartanka.
Sida laga soo xigtay Ahrefs, kaliya 22% bogagga ku jira natiijooyinka Top 10 ee Google ayaa la daabacay sannad gudihiis.
In kasta oo taasi u muuqato mid niyad jebinaysa, haddana waa dagaal mudan in la daba socdo. Waxaan had iyo jeer ka bilownaa macaamiisheenna aqoonsiga ereyada muhiimka ah ee maxalliga ah iyo kuwa dhaadheer halkaasoo ay ka muuqdaan muuqaal raadinta iyo ereyada muhiimka ah waxay muujinayaan ujeedo gaar ah oo ku saabsan iibsashada. Waan falanqeyn karnaa tartanka, aqoonsan karnaa halka boggooda kor loogu qaadayo (dib-u-xirnaanta), qaabeynta bog kafiican macluumaadka casriga ah iyo warbaahinta (sawir gacmeedyada iyo fiidiyowga), ka dibna waxaan qabaneynaa shaqo weyn oo aan ku dhiirrigelinno. Ilaa iyo inta barta macaamilkayagu ay caafimaad qabaan marka loo eego Maamulayaasha Websaydhada, waxaan inta badan aragnaa inay ku jiraan 10ka bilood ee ugu dambeeya.
Taasina waa mid dabiici ah isweydaarsi. Erayadaa ereyada-dabada-dheer ah waxay diiradda saareen ku saabsan mowduuc dhexe ka dibna waxay ka caawiyaan goobta inay ku sarraysnaato isku-darka ereyada muhiimka ah. Waxaan sii wadeynaa inaan maalgashi ku sameyno kor u qaadida bogagga hadda jira ee horay u qiimeeyay sidoo kale ku darista bogag cusub oo daboolaya mowduucyo caawin doona. Waqti ka dib, waxaan aragnaa macaamiisheennu inay u guuraan ereyo fure ah oo aad u tartamaya, badiyaa waxay dhaafaan tartanka sanad ama laba sano gudahood. Ma ahan wax fudud mana ahan mid qaali ah, laakiin dib ugu soo laabashada maalgashiga waa wax lala yaabo.
Sida Ugu Degdegga Badan Google:
Hubi in aad goobta waa dhakhso, Adeegsiga shabakadaha gudbinta waxyaabaha, iskudhiska muuqaalka, kumbuyuutarka, iyo keydinta.
Hubi in aad goobta si fiican ayaa loogu talagalay, si fudud loo akhriyi karo, oo ka jawaabi kara cabbirka shaashadda ee kala duwan.
Cilmi baaris maxalli ah iyo dabada-dheer keywords taasi waa tartan yar waxayna sahlanaan doontaa darajada.
Samee waxyaabaha taasi waa mid gaar ah, xiiso leh, oo dhammaystiran mawduuca aad isku dayeyso inaad dareenka ku soo ururiso.
Add sawiro, maqal, iyo muuqaal nuxur ka dhigaya inuu bogga ka dhigo mid soo jiidasho leh.
Hubso in boggaagu si wanaagsan loogu calaamadeeyay cinwaanno sax ah, dhinac dhinac, iyo kuwo kale Qaybaha HTML.
Hubso in boggaagu leeyahay cinwaan weyn taasi waxay khuseysaa ereyada muhiimka ah ee aad raadineyso.
Hubso inaad tilmaanta meta waxay soo kordhin doontaa xiisaha waxayna ka dhigi doontaa boggaaga mid ka duwan kuwa kale Bogga Natiijooyinka Mashiinka Raadinta (SERP).
Ku dhiirrigeli waxyaabahaaga bogagga leh dib u xirmay bogagga kale ee darajooyinka loogu talagalay mawduucyada la midka ah.
Ku dhiirrigeli waxyaabahaaga gudaha goleyaasha warshadaha iyo emayl iyo baraha bulshada. Xitaa waxaad rabi kartaa inaad xayeysiiso.
Si joogto ah u sii wanaajiya nuxurkaaga si aad u sii haysato ka hor tartanka.
Nasiib wanaag, algorithms-ka Google way ka xawli badan yihiin kuwa madow ee la-taliyayaasha raadinta… marka ha shaqaalayn qof kuu soo dira email adiga kuu sheegaya inuu kaa heli karo bogga koowaad. Marka hore ogaysii in aysan wax fikrad ah ka haynin waxa keywords aad bartilmaameedsato, inaad horeyba uguqorto bogga koowaad ee ereyada sumadaha leh, cidda tartankaagu noqon karo, ama sida aad si wax ku ool ah ugu muujineyso soo noqoshada maalgashiga. Badanaa maahan, adeegyadan waxay burburin doonaan awooddaada inaad ku qiimeyso muddada-dheer adoo jabinaya shuruudaha adeegga Google iyo helitaanka boggaaga calanka. Iyo hagaajinta goobta ciqaabeed ayaa aad uga dhib badan qiimeynta mid weyn!
Qiimeynta weyn waxay u baahan tahay hagaajinta goobta, oo ay ku jiraan xawaaraha bogga, ka jawaab celinta cabbirka shaashadda ee kala duwan, hodanka waxyaabaha ku jira, iyo awoodda boggaas si fudud loogu wadaagi karo loona tixraaci karo bogagga kale ee khuseeya. Waa isku-darka astaamo kasta oo goobta ka dhaca iyo wixii ka baxsan - oo aan ka shaqeyneyn uun hal istiraatiijiyad. Waa tan faahfaahinta buuxda, Mudo intee le'eg ayay ku qaadataa Darajada Google?
Courtesy: Kooxda Shabakada
Tags: ahrefsgeyntadib u xiridereyada muhiimka ah ee tartankadarajada googlesidaIlaa goormaansida looxubno HTMLkordhin darajodarajo keywordereyada muhiimka ah ee dheeraadka ahtilmaanta metadarajo dabiici ahraadinta dabiiciga ahdarajodarajeeyoalgorithm darajaynarrimaha saamayntaSEOxawaaraha goobtakooxda websaydhkahoryaalka